Anime Dolls Dolls, Manga Porn Cosplay, Caruurta Cabirka Nolosha | Urdolls
Doll-galmoodka Anime ee ugu Fiican ee Rakib ah
Caruusadaha galmada anime waa caruusadaha waaweyn ee laga sameeyay filimka iyo animation-ka telefishanka ee dadka iyo waxyaabaha. Madadaalada waa qayb muhiim ah oo ka mid ah animation warshadaha dadka waaweyn. Alaabada lagu ciyaaro ee Anime inta badan waxaa ku jira alaabta lagu ciyaaro ee anime, cabirka nolosha caruusadda galmada anime, Caruusadaha anime ee jabaaniiska iyo caruusadaha lagu daro anime. Caruusadaha Anime waa alaab heer sare ah oo laga soosaaray warshadaha animation.
Ma waxaad tahay taageere anime ah? Miyaad had iyo jeer ku riyoon jirtay kulan kaamil ah astaamaha anime? Aad baad nasiib u leedahay inaad halkan timaado. Caruusadaha galmada anime halkan waxaa loogu talagalay iyadoo loo eegayo doorka anime. Waxay isticmaalaan nooc ka mid ah qalfoofka la xoojiyay, kala-goysyadu waa kuwo caqli-gal ah, jilid badan, oo si fudud loo shaqeyn karo. Madaxooda iyo jidhkoodaba dhammaantood waxay adeegsanayaan farsamada daabacaadda ee 3D. Dhammaan maaddooyinka waxaa lagu sameeyaa darajo la isku qurxiyo oo way ammaan yihiin. Waxay ku guuleysan karaan dhammaan riyooyinkiinna. Haatan bal aan eegno caruusadda anime ee aad ugu jeceshahay oo aan gurigeeda u qaadno.
Joanna - Naaso Qurux Badan 140CM Dhex Dheer Caato WM Love Dolls
Hayden - Naasaha Waaweyn 165CM Sexy Beauty Anime WM Dolls
Daleyza - Naaso Qurux Badan 145CM Anime Irontech Dolls
Kayla - E Cup 166CM Qaangaarka TPE Irontech Dolls
Arabella 153CM Naasaha Waaweyn Naag Qurux Leh TPE WM Dolls
Qalalan - 155CM Xaqiiqda dhabta ah Gabadha Yar ee Jabbaan Japanese Ninja Cosplay TPE Doll Doll
Monica - Ciyaaraha Dadka Weyn Fun 2 Hole Hadiyad La'aan Qalfoofka Anime Sex Doll
Wareeg Waji Caato Ah Dameer Weyn 165cm Forster TPE Anime Doll
Doorka Jacaylka ee Loogu Ciyaarayo Xaviera Jane TPE Doll 170CM Waalidiin Yar Oo Wehel Ah
Qurux Meredith Wallace TPE Doll 165CM H Cup Saaxiib Weyn Naaso Weyn
SanYue - 146CM DL Silicone Sex Doll Elf Dhegaha Qanciya Libido Cute Face
SanYing - 146CM DL Silicone Sex Doll Cute Maid Sexy Wildcat Real makeup
Eunjin - 158CM Silicone Saafi ah Japanese Jacayl Doll Game Ciyaaryahan Xirfad Leh
Dana Dierser - Super Soft Realistic Touch 155CM Saafiran Silicone Doll Doll
Iibso Nolosha Cosplay Jinsiga Doll Animation
Caruusadaha galmada Anime waa noocyo ka mid ah anime, iyo anime qurux badan ayaa loo abuuray sidii caruusado. Waa wax soo saar ka mid ah horumarka iyo hagaajinta qiimaha warshadaha si looga dhigo sawirka anime inuu kuugu dhowaado adiga iyo qalbiyadeenna. Caruusadaha galmada anime ee yar yar ayaa ah alaabada durugsan ee anime, waxaana sidoo kale loo fahmi karaa inay yihiin iskudhafka anime iyo alaabada lagu ciyaaro galmada.
Guryaha urdolls-ka waxaad awoodi doontaa inaad sameysid qaab caruusad ah oo khiyaali ah oo jinsi ah! Laga soo bilaabo indhaha iyo timaha ilaa dharka iyo kabaha, waad u beddeli kartaa sida aad jeceshahay! Aad u qurux badan, ma jeceshahay? Kaalay ka caawi labbiskeeda! Noqo gabadha ugu quruxda badan oo qaado!
Asal ahaan - Hentai Anime Sex Doll oo iib ah
Moodooyinka kartoonka ka hor 1980-meeyadii badanaa waxay tixraacaan moodellada milatari iyo kuwa gawaarida. Qaabka sheekooyinka sayniska ayaa ah uun wax lagu daboolayo baahiyaha ciyaartooyda da'da yar. Sidaa darteed, qiimaha waa mid aad u hooseeya waxsoosaarkuna waa mid aad u fudud. Qiimaha guud waa kudhowaad 300 yen. Guusha Mobile Suit Gundam awgeed, baahida suuqa qaangaarka, qaabka Gundam oo asal ahaan kaliya lagu qiimeeyay 300 yen ayaa isla markiiba raacay moodal qaali ah oo ku wajahan dadka waaweyn ee Gundam oo lagu qiimeeyay 1,000 yen ama xitaa 3,000 yen. Marka laga sii gudbo, qaabka sayniska ayaa sidoo kale la dhihi karaa wuxuu awood u yeelan karaa inuu ku horumariyo xaaladda maanta iyadoo la adeegsanayo qaabka militariga si la mid ah dagaalka lagula jiro qaabka militariga.
Alaabtaan ayaa si wada jir ah loogu magacaabaa HOBBY, waxaa jira kala duwanaansho u dhexeeya muruqyada adag (CORE HOBBY) iyo jilicsanaanta jilicsan (LIGHT HOBBY). Sida gacha, kaarka laalaadda, moodeelka, gacanta lagu sameeyo, kuwaas oo leh qiimo yar oo wax ku ool ah oo si khaas ah loo uruurinayo qurxinta waxaa loo yaqaan moodellada anime ama durugsan ee adag. Qiimaha qaraabada ahi waa mid aad u sarreeya; Intaa waxaa dheer, waxaan badanaa amaahannaa muuqaal caruusadaha galmada anime ee ugu fiican si aan u soo saarno badeecooyin wax ku ool ah sida xafiisyada xafiisyada, dharka, silsiladaha muhiimka ah, silsiladaha moobaylka, iwm, kuwaas oo aad u jaban.
Qaraxa wicitaanka animation-ka, qof walbo wuxuu aad u xiiseynayaa badeecooyinka qaangaarka ah ee loo yaqaan 'doll sex anime porn'. Japan, Yurub iyo Mareykanka, badeecooyinka qaangaarka ah ee loo yaqaan 'anime doll sex doll' ayaa muddo dheer caan ahaa, dad badan ayaa u adeegsada shaqooyin farshaxan ah oo loogu talagalay ururinta caruusadda dabeecadda jinsi ee sanadka ayaa sidoo kale horumarinaysa adduunka oo dhan.